Warshadda Silicone ee Shiinaha Silsiladaha iyo Xargaha Xargaha | SJJ
Silsilado silikoon ah & silsilado caadadiisu waa shay xayaysiis ah oo aad u wanaagsan oo qiimo jaban oo loo isticmaalo aruurinta, dhacdooyinka iyo hawlaha samafalka. Waxaa laga sameeyay 100% walxo silikoon ah, waara oo aan sun ahayn iyo waqtiga dhalmada degdegga ah.
Silsilado Silsiladoiyo cumaamad -gacmeedyadu waa badeecadahayaga ugu waaweyn, kuwaas oo aad iyo aad caan uga ah adduunka oo dhan. Silsiladaha gacanta ee silikoonku waxay caan ku yihiin tayada qiimaha sare leh iyo caag silikoon ku habboon. Maaddada silikoonku waa bay'ada iyo darajada cuntada, waxay u adkaysan kartaa heerkulka hooseeya ama sarreeya, markaaSilsilado Silsiladoiyo cumaamad -gacmeedyada waxaa loo isticmaali karaa meelo kala duwan iyo dhammaan xilliyada. Silsiladaha silikoonku waa u siman yihiin oo jilicsan yihiin carruurta, sidaa darteed waxay caan ku yihiin dugsiyada. Jijimooyinka silikoonku sidoo kale waa kuwo dabacsan oo xoog ku filan dadka waaweyn si ay ugu adeegsadaan dallacsiinta ama dhacdooyinka sida isboortiga, carnival ama dhinacyada kale. Calaamado kala duwan ayaa la xardhi karaa, la dejin karaa, la daabici karaa ama laser ayaa lagu xardhi karaa iyadoo loo eegayo codsigaaga. Naqshaduhu way kala duwan yihiin si loo daboolo baahiyahaaga duurjoogta ah, si loo muujiyo fikradahaaga astaamaha, oo waara in la sii wado muddo dheer. TheSilikoon Silsilads iyo cumaamad -gacmeedyada ayaa si caadi ah loogu sameeyaa cabbirrada caadiga ah ee carruurta ama dadka waaweyn, laakiin sidoo kale waa la habeeyay iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha.
Iyada oo leh in kabadan 36 sano oo taariikh ah, warshadeena ayaa awood u leh inay siiso waqti -gaaban silsilado silsilado iyo jijimooyin tayo sare leh. Waxaan leenahay waaya -aragnimo hodan ah oo ku saabsan amarada waaweyn ee Silicone Silsiladaha iyo cumaamad -gacmeedyada, laakiin iyadoon loo eegin amaro waaweyn ama amarro yaryar ayaa la soo dhaweynayaa wakhti kasta. Farshaxanka warshadda ayaa la siin doonaa oggolaanshahaaga ka hor muunadaha ama soo -saarka. Shaqaalahayagu waa xirfadleyaal gabdhaha wax iibiyana waxay ku fiican yihiin Ingiriisiga. Waxaan sugeynaa baaritaankaaga!
Qalabka: silikoon tayo sare leh
Cabbirka: Cabbirka caadiga ah waa 202*12*2 mm dadka waaweyn, 190*12*2 mm carruurta. Cabbirada la habeeyay waa la aqbali karaa.
Midabada: Waxay la jaanqaadi kartaa midabada PMS, wareegga, qaybta, iftiinka mugdiga, midabada ku habboon ayaa sidoo kale la heli karaa.
Logos: Logos waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa, waa la dejin karaa, khad-ku xiran, Laser ayaa xardhan iyo kuwo kale
Ku xirnaansho la'aan.
Xirxirida: 1 pc/bac poly, ama sida ku cad weydiinta macaamiisha
MOQ: Ma jiro xaddid MOQ
Hore: Qalabyada Qoryaha
Xiga: Qadaadiicda Ciidanka
Silsilado Silicone Christian ah
Silsilado Silsilado Bulk
Silsilado Silsilado Jaban
Silsilado Rubber Jijimooyin
Silsilado Dhar Gacmeedyo
Suumanka lugaha iyo suumanka
Musmaarrada Lapel ee Hinged